उत्तम एन्ड्रोइड फोनहरू: परीक्षण, सुरुवात, अफवाहहरू ... | Androidsis (पृष्ठ) 30)
आज हामी तपाईलाई ओनेप्लस २ को स्पेनिश भाषामा यो पूर्ण समीक्षा र विश्लेषण ल्याउँदछौं, जुन बर्षको एक धेरै प्रत्याशित एन्ड्रोइड टर्मिनल हो।
सामसुले हामीलाई Tizen अन्तर्गत गियर S2 र दुई फरक संस्करण डिजाइनमा ल्याउँछ, एउटा अधिक क्लासिक र अर्को सानो सानो परिपत्र पर्दाको लागि।
नयाँ अफवाहहरू एलजी द्वारा निर्मित २०१ Ne नेक्सस टर्मिनलको भविष्यका विशेषताको बारेमा देखा पर्दछ।
सोनी Xperia Z5 प्रीमियम जापानी निर्माता को नयाँ थप छ 4K को साथ प्रयोगकर्ता स्क्रीन मा उच्चतम सम्भव संकल्प दिन।
LG वाच उर्बानको विशेष संस्करण २ the क्यारेट सुनको र 23०० युनिटहरूको लागि १,२०० डलरको मूल्यको लग्सी संस्करणको साथ आउँदछ।
Honor को Honor7को लागी एक चाखलाग्दो पदोन्नति जारी गरिएको छ। यदि तपाइँ तिनीहरूको स्टोरमा सस्तो Honor7खरीद गर्न चाहानुहुन्छ भने अगस्ट 300 सम्म तिनीहरूले यसलाई 31 यूरोमा बेच्छन्।
नयाँ गुगल ट्याब्लेटको नेक्सस 8 को पहिलो छविहरू देखा पर्‍यो।
सामसु्गले आईफोन मालिकहरुलाई नयाँ ग्यालक्सीमा जानको लागि मनाउन को लागी नया प्रोग्राम सुरू गर्यो। हामी यसलाई राम्ररी विश्लेषण गर्छौं।
Nexus5२०१ of को प्रस्तुतीकरण सेप्टेम्बर २ on मा हुन सक्छ
दक्षिण कोरिया बाट एक नयाँ अफवाह भन्छ कि Nexus52015 को प्रस्तुति सेप्टेम्बर 29 मा आउन सक्छ।
Honor7प्रस्तुत भैसक्यो। र हामी नयाँ सम्मान फ्ल्यागशिप परीक्षण गरेपछि हामी तपाइँलाई हाम्रा पहिलो प्रभावहरू ल्याउँछौं। के तपाइँ यसलाई याद गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
जापानी बहुराष्ट्रिय सोनीले गल्तीले Xperia Z5, Xperia Z5 Plus र Xperia Z5 Compact को सबै स्पेसिफिकेसन लीक गरेको छ।
ओबी वर्ल्डफोन एक दीर्घकालीन एप्पल सीईओ को शर्त हो जसले उब्जिरहेको बजारमा सस्तो मूल्य र उत्कृष्ट डिजाइनमा दुई टर्मिनलहरू सुरू गर्दछ।
दक्षिण कोरिया मा आधारित कम्पनी को बारे मा नयाँ लीक, बोल्दछ कि यो नयाँ टर्मिनल प्रस्तुत गर्न सक्छ, ग्रान्ड अन र मेगा अन को नाम मा।
तपाईं एक सुन ग्यालक्सी नोट5खरीद गर्नुहुन्छ?
सामसु'sको नयाँ टर्मिनलले भर्खरै बजारमा प्रवेश गर्यो र ग्यालक्सी नोट of को एक सुनको संस्करण देखा पर्‍यो। तपाईं एक सुन ग्यालक्सी नोट5खरीद गर्नुहुन्छ?
ऑनर now अब युरोपमा अवतरण गर्न तयार छ
२ 27 अगस्तमा, हॉनरले ह्यानवे subsid को युरोपेली संस्करण प्रस्तुत गर्नेछ, हुवावे सहायक कम्पनीको नयाँ प्रमुख
गुगल नेक्सस October अक्टुबरमा प्रस्तुत गरिने छ र नयाँ एन्ड्रोइड .5.० मार्शमेलो अपडेटको साथ आउँनेछ।
युरोपे, अफ्रिका र मध्य पूर्वमा दुई मिड-रेंज स्मार्टफोन सुरू गर्न वाइली फक्ससँग साइनोजेन पार्टनर्स
साइनोजेन विल्ली फक्ससँग साझेदारी गर्दै छ जसले राम्रो हार्डवेयरको साथ सस्तो मूल्यमा दुई मध्य-दायरा स्मार्टफोन ल्याउनेछ।
भविष्यमा चिनियाँ निर्माता, एचटीसी एरो को कवच को वर्तमान डिजाइन6को समान डिजाइन हुन सक्छ।
दक्षिण कोरियाली निर्माता सामसुले १ 18,4..XNUMX इन्च स्मार्ट ट्याब्लेट प्रक्षेपण गर्न सक्दछ।
सामसु्गले नयाँ टर्मिनल, ग्यालक्सी नोट 5, मा डिजाइन त्रुटिको कारण एस पेनको समस्याहरूबारे उठेका आलोचनाहरूको जवाफ दिन्छ।
स्मार्टफोनहरू भन्दा पहिले यो महत्त्वपूर्ण थियो कि फोनको आकार सानो थियो। के तपाईं साना Android मोबाइल पूरा गर्न चाहानुहुन्छ? यो एलेफोन मिनी हो।
Nexus 8 8 कोर संग एक बेंचमार्क मा देखा पर्छ
एउटा बेन्चमार्कमा नेक्सस tablet ट्याब्लेट देखा पर्‍यो। यो 8 इन्च ट्याब्लेट 8 कोर कोरको जीपीयूको साथ आउँछ।
ग्यालेक्सी नोट in मा एस पेनको साथ सामसु aको समस्या छ त्यसैले यो युरोपमा पुग्नु अघि यसलाई कुनै तरिकामा यसको उपचार गर्नुपर्नेछ
आज हामी तपाईंलाई भर्खरको अपडेटहरू उपलब्ध गराउँदछौं जुन सैमसंग, एलजी, सोनी र हुवावेका लागि एन्ड्रोइड ड्राइभरहरू स्थापना गर्न उपलब्ध छन्
Huawei Nexus क्वालकॉम, स्न्यापड्रैगन 2.1२० द्वारा निर्मित नयाँ प्रोसेसरको सट्टा स्न्यापड्रैगन 810१० को संस्करण २.१ सम्मिलित गर्न सक्दछ।
आज हामी तपाईंहरू सबैसँग ग्यालेक्सी S6 मौसम विजेट र यसको स्थापना विधि साझेदारी गर्दछौं कुनै पनि एन्ड्रोइड टर्मिनलमा यसलाई मजा लिन सक्षम हुन।
Huawei अर्को नेक्सस नयाँ लीक फोटोहरु मा देख्न सकिन्छ, धातु को बाहिरी संग यसको अन्तिम उपस्थिति देखाउँदै।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट5र एस Ed एज प्लसमा मल्टिटास्किंगको साथ नयाँ समस्याहरू, अत्यधिक आक्रामक मल्टिटास्किंग।
ASUS ब्राजिलमा Zenfone2को एक विशेष संस्करण २ launch256 GB को आन्तरिक भण्डारणको साथ सुरू गर्दछ जुन यस स्मार्टफोनलाई अन्य चुनौतिहरूमा लैजान्छ।
आईएफए फेयर कार्यक्रम हुनेछ जहाँ कोरियाली निर्माता एलजी आफ्नो नयाँ उत्पाद, जी प्याड II १०.१ ट्याब्लेट स्न्यापड्रैगन 10.1०० चिप र २ जीबीको र्यामको साथ प्रस्तुत गर्दछ।
वनप्लस २ ले यसको पहिलो अपडेट ओटीए मार्फत एन्ड्रोइड, स्टेजफ्रेटमा ठुलो प्वाल समाधान गर्न प्राप्त गर्दछ।
सोनी बर्फामा आइएफए २०१ during को बखत प्रस्तुत हुन सक्दछ नयाँ टर्मिनल, एक्सपीरिया जेड Comp कम्प्याक्ट, जसमध्ये पहिलो प्रचार छवि पहिले नै चुहावट भयो।
Huawei Nexus को अवधारणा भिडियो, के तपाइँ यो जस्तो हुन चाहानुहुन्छ?
एक अवधारणा भिडियोले Huawei Nexus कस्तो देखिन्छ देखाउँदछ। के तपाई यो जस्तै हुन चाहानुहुन्छ?
Honor आफ्नो नवीनतम स्मार्टफोन, Honor 7i प्रस्तुत गरेको छ। एक मोबाइल फोन जसमा १ixel मेगापिक्सेल घुम्ने क्यामेरा समावेश छ।
हामी एक महिनाको लागि सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 एजको परीक्षण गर्दै छौं र यी हाम्रो निष्कर्षहरू हुन्
सामसुले घोषणा गर्‍यो कि नयाँ ग्यालक्सी नोट5युरोप वा अमेरिकामा प्रस्तुत गरिने छैन यो एसियाली बजारमा रहन्छ र त्यहाँबाट पहिलो ड्रप टेस्ट आउँछ।
चुहावट अनुसार, नयाँ HTC फ्लगशिप HTC O2 कहलाइनेछ र उपकरणको शरीरको लागि एल्युमिनियम राख्नेछ।
सेप्टेम्बर महिना हो जुनमा नयाँ ब्ल्याकफोन २ सुरूवात हुनेछ, टर्मिनल जसले सुरक्षा र गोपनीयताको लागि वकालत गर्दछ।
यो गाइएको थियो, आईएफए २०१ for को लागी पहिले नै कम छ, त्यसैले धेरै कम्पनीहरूले प्रेस कल गर्न थालेका छन्, जसरी सामसु withको अवस्थामा छ।
एनयूसीएलयूएन २ को बेन्चमार्क लीक भएको छ, निर्माता एलजीबाट नयाँ SoC जुन संग यो सामसु'sको Exynos दायरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ।
सामसुले आफ्नो नयाँ दायरा उपकरणहरूको प्रस्तुत गर्दछ: ग्यालक्सी ओ
सामसुले अझै पनि यन्त्रहरूको दायरा विस्तार गर्न चाहन्छ र त्यसैले नयाँ दायरा, ग्यालक्सी ओ प्रस्तुत गर्दछ।
शाओमीले फेरि फेरि शाओमी रेडमी नोट २ को 800.000००,००० युनिटहरू बेचेको छ मात्र १२ घण्टामा। चिनियाँ निर्माताका लागि नयाँ रेकर्ड।
यस वर्षको लागि नयाँ गुगल नेक्सस what के हुनेछ भन्ने पहिलो छवि लीक भएको छ। धेरै उपयोगकर्ताहरु द्वारा लामो प्रतीक्षा फोन।
सोनीको नयाँ उपकरण Xperia Z5 Plus को बारेमा जानकारी लीक भयो। टर्मिनल जसमाaके स्क्रीन र फिंगरप्रिन्ट सेन्सर हुनेछ।
हामी चुहावट जारी राख्छौं र आज हामीले भविष्यको हुवावे नेक्ससको बारेमा कुरा गर्नुपर्नेछ।
धेरै प्रयोगकर्ताहरूद्वारा अपेक्षित, नेक्सस २०१ 2015 आउँदै गरेको महिनाहरूमा प्रस्तुत हुनेछ, तर यो चुहावटबाट जोगिएको छैन र हामी यसलाई भिडियोमा देख्न सक्छौं।
हिजो दिउँसो नयाँ सामसु ter टर्मिनल, ग्यालक्सी नोट5को प्रस्तुतीकरणको दिन थियो ...
शाओमीले आधिकारिक रूपमा यसको नयाँ phablet, Redmi नोट २ प्रस्तुत गरेको छ। एक मध्यम-दायरा phablet जसले कुरा गर्न धेरै दिनेछ।
IFixit, एक कम्पनी जसले मोबाइल फोनहरू भत्काउनमा माहिर छ, नयाँ OnePlus २ लाई पूर्ण रूपमा पृथक गरिसकेको छ। के तपाईं OnePlus २ भित्र कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्न चाहानुहुन्छ?
यद्यपि यो अविश्वसनीय समाचार देखिन्छ, सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट5युरोपमा वितरित गरिने छैन केवल सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 एज प्लसमा शर्त।
आज नयाँ ग्यालक्सी एस Ed एज प्लस प्रस्तुत गरिएको थियो। यसले कस्तो सुधार ल्याउँछ? ग्यालक्सी एस Ed एज र S6 एज प्लसको यो तुलना नगुमाउनुहोस्।
आज नयाँ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट of को पाँचौं पुस्ता प्रस्तुत गरिएको थियो। यसले अघिल्लो जेनेरेसनको सन्दर्भमा कस्तो सुधार ल्याउँछ?
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 एज + पहिले नै प्रस्तुत गरिसकिएको छ। यी सामसु'sको नयाँ घुमाउरो डुअल प्यानल फोनको रहस्य हो
सामसु्गले नयाँ ग्यालक्सी नोट5लाई घोषणा गर्‍यो जुन ग्यालक्सी एस as को समान डिजाइन लाइनहरु बोक्छ। एकदम राम्रो स्मार्टफोन तर माइक्रोएसडी कार्ड बिना नै।
के तपाईं अनप्याक्ड सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट live लाईभ हेर्न चाहानुहुन्छ? एन्ड्रोइड्सिसबाट हामीसँग तपाईंको लागि अधिमान्य सिट आरक्षित छ।
के तपाई आमन्त्रित बिना वनप्लस २ किन्न चाहानुहुन्छ? सगरमाथाको शिपिंग लागतको साथ तत्काल शिपिंगको लागि स्टकमा पहिले नै छ र प्रतिस्पर्धी मूल्य भन्दा बढीमा।
हुवावेले बर्लिनमा आईएफए २०१ 2015 को लागि योजना गरेका धेरै नवीनताहरू छन्। ती मध्ये एक अर्को टर्मिनल, हुवावे मेट ates जुन मेलामा प्रस्तुत हुनेछ।
एलजीको नेक्सस development विकासको क्रममा छ र अलि अलि बढी सम्बन्धित समाचारहरू आउँदैछन्, यस पटक यसमा निर्भरताहरू छन्।
चीनको नयाँ कम्पनीले हामीलाई नयाँ शक्तिशाली टर्मिनलको एक महत्वपूर्ण मूल्यमा प्रस्तुत गर्दछ, यो ZUK Z1 हो।
यो एक घुमाइएको स्क्रिनको साथ पहिलो Huawei स्मार्टफोन हुन सक्छ
हुवावे आउँदै गरेको महिनाहरुमा प्रस्तुत गर्न सक्दछ जुन यसको इतिहासमा घुमेको पर्दाको साथ पहिलो स्मार्टफोन हुनेछ।
चिनियाँ मिडियाले भनेका छन कि AnTuTu को माध्यमबाट गएको नया फोन हुवावे मेट Plus प्लस वा हुवावे मेट7मिनी हो।
हामीसँग स्लाइडि camera क्यामेराको साथ ईन्ग्मेटिक ऑनर फोनको नाम पहिले नै थाहा छ: Honor 7i
एन्गुटु सामसु phone फोनले आन्टुमा एक प्रभावशाली स्कोर हासिल गर्दछ। यो सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7 हुनेछ?
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट5र ग्यालक्सी एज + को डिजाईन देखाउँदै नयाँ तस्बिरहरूको श्रृंखला रिसाव भयो
आन्तरिक लीकले सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S7: स्न्यापड्रैगन 820२० र एन्ड्रोइड M को पाखमुनिको प्रदर्शन परीक्षण देखाउँदछ
आन्तरिक सामसु Samsung कागजात छोड्दा सामसु Samsung ग्यालक्सी एस7स्न्यापड्रैगन 820२० एसओसीको साथ परीक्षण भईरहेको छ
MIUI7अगस्त १ on मा सुरूवात हुनेछ
शाओमीले एन्ड्रोइड ललीपप, एमआईयूआई on मा आधारित, अपरेटिंग सिस्टमको नयाँ संस्करण अगस्ट १ on मा सुरू गर्ने छ।
हुवावेसँग आईएफएका लागि तयार पारिएको स्मार्टफोन छ जुन मेट 8 होइन
सबैले Huawei अर्को आईएफए को समयमा नयाँ मेट 8 प्रस्तुत गर्न को लागी अपेक्षा, तर जे होस्, चिनियाँ निर्माता फेयर मा अर्को उपकरण ल्याउने।
शाओमी रेडमी २ प्राइमले आधिकारिक रूपमा घोषणा गर्‍यो
शाओमीले आज प्रस्तुत गरेको छ, रेडमी २ प्राइम, भारतमा पूर्ण रूपमा निर्मित यसको पहिलो स्मार्टफोन के हो।
शाओमी रेडमी नोट २ का केही स्पेसिफिकेसन लीक भयो
१ August अगस्टमा, सियामीले सर्वसाधारणलाई नयाँ टर्मिनल, शाओमी रेडमी नोट २ प्रस्तुत गर्नेछ।
१ August अगस्टमा, सामसुले नयाँ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट, पेश गर्नेछ, जुन लीक भएको छ, फेरि फेरि एस ge एज प्लसको साथ।
Meizu MX5 प्रो एक Exynos 7420 XNUMX२० प्रोसेसर एकीकृत गर्न सक्छ
जुनको अन्तमा हामी तपाईंलाई एशियाई निर्माताको नयाँ प्रमुख Meizu MX5 देखाउँदछौं। Meizu MX5 प्रो प्रस्तुत नभएसम्म र यो केहि पछि अर्को Meizu टाइटन को नयाँ नयाँ रहस्यहरू प्रकट हुन्छन्। अन्तिम? त्यो Meizu MX5 प्रो एक Exynos 7420 XNUMX२० प्रोसेसर चढ्न सक्छ।
बिछाउको स्प्याक्टरले पहिले नै एचटीसीको लागि योजना गरिरहेको छ
एचटीसीको कार्यबल कम गर्न र बढ्दो कम आशाजनक भविष्यको साथ कम्पनी बचाउन पहिले नै योजनाको योजना छ।
यदि तपाईं सस्तो HTC One M9 किन्नको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ भने अब अरू देखिनुहुन्न: ईबेमा यो 445 XNUMX यूरोमा उपलब्ध छ।
Jarir, एक पूर्व अनलाइन स्टोर जुन मध्य पूर्वमा बिक्री गर्दछ, विज्ञापनको एक श्रृंखला प्रकाशित गर्दै ...
एचटीसीले गम्भीर नयाँ वित्तीय रिपोर्ट जारी गर्‍यो। समाधान? अधिक आकर्षक स्मार्टफोनहरूको एक नयाँ पुस्ता
HTC को बिक्री गम्भिर हुन सुरु। ताइवान निर्माताले घाटामा २ 252२ मिलियन डलर पुग्यो।
Huawei माने Nexus भिडियो मा देखा पर्छ
चुहावटले हामीलाई ती घट्ना हुनु अघि नै चीजहरू देखाउँदछ। हामी सबै यस वर्षमा एक Huawei Nexus को उम्मीद गरिरहेछौं जुन स्पष्टतः भिडियोमा लीक भएको छ।
नयाँ बेच्ने रणनीतिहरू: एकप्लस २ दानको लागि ईबेमा लिलामीको लागि
आलोचना गरिएको वनप्लस निमन्त्रणाले आफूलाई बेच्नको लागि एक मार्ग खोजेको छ वनबेस २ को ईबेमा परोपकारी नीलामीलाई धन्यवाद।
सोनीको Xperia Z5 का नयाँ लीक छविहरू सोनीको आगामी फ्लगशिपको पक्षमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देखाउँदछ।
२०१ 2015 मा हामी सबैभन्दा धेरै पर्खिरहेका टर्मिनलहरू मध्ये ग्यालक्सी नोट5हो।
Huawei को उप-ब्रान्ड यूरोपका लागि मात्र डिजाइन गरिएको छ, Honor, एक स्लाइडिंग क्यामेरा संग एक उपकरण होल्डिंग।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S4 मिनी प्लस आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत
चुपके तरीकामा, कोरियाली कम्पनीले आधिकारिक रूपमा नयाँ टर्मिनल प्रस्तुत गरेको छ, यो सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस Mini मिनी हो।
गुगलबाट अर्को मोबाइल फोन पत्ता लगाउन कम बाँकी छ र एलजी, नेक्सस5२०१ 2015 द्वारा निर्मित।
चिनियाँ कम्पनी वनप्लसको यो वर्षको अन्त्यसम्ममा तेस्रो स्मार्टफोन छ, के यो अफवाहक वनप्लस मिनी हुनेछ?
इभिलेक्सले ग्यालक्सी नोट of का सुविधाहरू के हुनसक्दछन् भन्ने कुरा प्रकट गरेको छ। हामी आज तिनीहरूको समीक्षा गर्दछौं।
आज हामी तपाईलाई ह्यानर of प्लस को एक पूर्ण विश्लेषण ल्याउँछौं, एक नया उच्च-एंड phablet जुन संग Honor आफ्नो तंग मूल्य को लागी बजार फट्न को लागी ईच्छा गर्दछ: € 6
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी जे २ ले जीवनका स .्केतहरू देखाउँदछ
ग्यालक्सी जे १ को उत्तराधिकारी केवल कुनामा छ। एक लीक परिक्षणको लागि धन्यवाद अर्को सामसु Samsung ग्यालेक्सी J1 को विशेषताहरु पुष्टि गर्दछ।
मोटो G3 को विकल्प, उत्तम विनिर्देशहरू र मूल्य
यो मेरो मोटो G3 का विकल्पहरू हुन्, उत्तम स्क्रीनहरू, प्रोसेसरहरू, र्याम, आन्तरिक भण्डारण मेमोरी र कम मूल्यमा पनि
केहि धेरै सकारात्मक बिक्री आंकडाको साथ, सामसुले ग्यालक्सी S6 र S6 किनाराको मूल्य कम गर्नेछ। अनप्याक गरिएको घटना भन्दा केहि दिन पहिले केहि संख्याहरू।
हामीले पहिल्यै अफवाहहरू र चुहावटहरूको साथ शुरू गरेका थियौं, यस मामलामा नेक्सस of को कथित रियर ओनलिक्सले लीक गरेको छ।
वनप्लस २ का लागि 750.000०,००० भन्दा बढी रिजर्भेसनहरू
वनप्लस २ का लागि already750.000०,००० भन्दा बढी रिजर्भेसनहरू छन्, पहिलो फोन वनप्लस मोडेलको सफलतालाई पार गर्न सक्ने फोन
सोनी मार्च मा Xperia Z5 + प्रस्तुत गर्न सक्दछ
नयाँ अफवाहहरूले सुझाव दिन्छ कि सोनी मार्च मा Xperia Z5 + प्रस्तुत गर्न सक्दछ। एक टर्मिनल जुन यसको शक्तिशाली सुविधाहरूको लागि बाहिर खडा हुनेछ।
लेनोवो Vibe P1, m,००० mAh ब्याट्रीको फोन
लेनोवो Vibe P1, ov००० एमएएच ब्याट्रीको साथ लेनोवोको नयाँ टर्मिनलको प्राविधिक विशेषताहरूको साथसाथै पहिलो तस्विर लीक भएको छ।
Meizu M2 भर्खरै प्रस्तुत गरिएको छ। Meizu नयाँ मध्य-दायरा टर्मिनल यसको मूल्य को लागी अलग छ: Meizu M2 १०० भन्दा कम खर्च हुनेछ
सामसु'sको अनप्याक्ड घटना अगस्त १ event मा, सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट and र ग्यालक्सी एस Ed एज प्लस अनावरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
वनप्लस २ आधिकारिक रूपमा दुई संस्करणका साथ घोषणा गरिएको छ, एउटा RAM जीबी र्याम र १GB जीबी भण्डारण €23 for को लागि र अन्य GB जीबी / GB 16 जीबी € 339। को लागि।
ताइवानमा आधारित निर्माता एचटीसी डिजायर 626२XNUMX बाट नयाँ मिड-रेन्ज टर्मिनल मोटो जीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मनसायले स्पेनमा आइपुग्नेछ।
हामी यो हेर्न सक्षम भएका छौं कि सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट of को एस-पेन कस्तो हुनेछ, दक्षिण कोरियाली निर्माताको फ्याब्लेटहरूमा आवश्यक तत्व र त्यो निर्माण गरिएको सामग्रीको लागि बाहिर खडा हुनेछ।
वनप्लस २ यसको आधिकारिक प्रस्तुतीकरण भन्दा घण्टा अघि फिल्टर गरिएको छ।
आज हामी तपाईंको लागि Xiaomi यी एक्शन क्यामेराको समीक्षा र विश्लेषण ल्याउछौं, GoPro Hero3जस्ता टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्सको साथ एक कार्य क्यामेरा वा खेल क्यामेरा जुन हामी १०० यूरो भन्दा कममा पाउन सक्दछौं।
वनप्लसले वनप्लस २ प्राप्त गर्न निमन्त्रणाको आरक्षण खोल्छ
सानो चिनियाँ स्टार्टअपको अर्को स्मार्टफोन पत्ता लगाउन धेरै दिनहरू बाँकी छ। त्यसैले वनप्लसले आमन्त्रित आरक्षण खोल्यो।
आज हामी तपाईलाई युलेफोन बी टच २ को समीक्षा र पूर्ण विश्लेषण ल्याउँदछौं, एक Android टर्मिनल एक कम-एन्ड्रोइड मूल्यमा उच्च-अन्त सुविधाहरूसहित।
सामसु byद्वारा गरिएको यन्त्रहरूको पुनर्गठनले ग्यालक्सी एस and र ग्यालक्सी एस Ed एजको १२128 जीबी संस्करण व्यावहारिक रूपमा हराउनेछ।
१. million मिलियन वनप्लस ओन्स प्रक्षेपण पछि बेचियो
वनप्लस २ अनावरण हुन लागेको छ। अर्को हप्ता हामी एशियाई निर्माता को नयाँ प्रमुख को सबै रहस्यहरु थाहा छ।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट of का प्रथम चित्रहरू फिल्टर गरिएका छन्
हामीसँग पहिले नै सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट5र नयाँ ग्यालक्सी एस edge एज + को पहिलो छविहरू छन्, जसले उनीहरूको अगस्ट १6को लागि पुष्टि गर्न सक्दछन्।
एक शुद्ध एन्ड्रोइड तपाईको छेउमा Xperia Z3 को साथ सोनीको नयाँ 'अवधारणाको लागि अवधारणा' को साथ प्रतीक्षा गर्दछ।
वनप्लस २ TENNA मार्फत जान्छ यसका सबै प्राविधिक सुविधाहरूको पुष्टि गर्दछ
ओनेप्लस २ टेनाका माध्यमबाट एशियाई निर्माताको नयाँ फ्लगशिपको सबै प्राविधिक विशेषताहरू देखाउँदै जान्छ
कोरियाली निर्माता सामसु Samsungसँग ग्यालेक्सी ट्याब एस २ .2.० र ग्यालक्सी ट्याब एस २ 8.0। With को साथ अर्को महिनाको लागि दुई नयाँ ट्याब्लेटहरू तयार छ।
मो वर्सीले पुष्टि गर्‍यो कि एचटीसी वन एम Android ले एन्ड्रोइड एम मितिमा अपडेट प्राप्त गर्नेछ? अपेक्षित जनवरी वा फेब्रुअरी २०१ expected
मीजुले मेइजु एम २ को प्रस्तुतीकरणका लागि आमन्त्रणहरूको एक श्रृंखला पठाएको छ जसमा यसले नोकियालाई स्पष्ट अनुमति दिन्छ।
Meizu नोकिया को नयाँ सहयोगी हुन सक्छ, विशेष गरी यदि हामी यो प्रकाशित गरेको नयाँ टिजरलाई ध्यानमा राख्यौं भने
इभिलेक्सले हुवावे नेक्ससको स्पेसिफिकेसन फिल्टर गर्दछ: 5,7 ad QuadHD स्क्रिन, स्न्यापड्रैगन 820२० चिप र मेटल बडी
Huawei एक नयाँ Nexus निर्माण गर्दैछ जुन QuadHD रिजोलुसनको साथ a.5,7 इन्चको स्क्रीनको साथ वर्षको अन्तिम क्वाटरमा आउँनेछ।
ग्यालक्सी नोट of को शुरुवात प्रक्षेपण युरोपमा ढिलाइ हुन सक्छ। जानकारीले आश्वासन दिन्छ कि यो अगस्त २१ मा महादेशमा पुग्ने छैन।
अर्को १२ अगस्त, २०१ 12 को लागि सामसु Un अनप्याक्ड कार्यक्रम व्यावहारिक रूपमा पुष्टि भइसकेको छ।
ZTE एक्सन आधिकारिक रूपमा .5,5..810 ″ QuadHD स्क्रिन, स्न्यापड्रैगन 4१० चिप र GB जीबीको र्यामको साथ घोषणा गर्‍यो।
जेडटीईले आधिकारिक रूपमा स्नेपड्रैगन 810१० चिप, .5,5. Qu "क्वाडएचडी स्क्रिन र GB जीबीको र्यामको साथ यसको नयाँ फ्लैगशिप ZTE एक्सन घोषणा गरेको छ।
यदि AnTuTu प्रदर्शन अनुप्रयोग बाट आउँदै गरेको जानकारी सत्य हो, २०१ Ne नेक्सस un अतुलनीय छ।
आज हामी तपाईलाई लेनोवो के, नोट, पूरा-3-बिट अक्टा कोर, २ जीबी र्याम र आईपीएस फुल एचडी स्क्रिनको विश्लेषण ल्याउँदछौं जुन हामी केवल १64 यूरोमा किन्न सक्छौं।